Cudurka Korona Fayrus Ayaa Fara ba’an ku Haayo Dalalka Reer Galbeedka | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Kiisaska xanuunka Korona fayruska ee Galbeedka ayaa cirka isku shareeray, dalalka ayaana ku dhawaaqay tallaabooyin adag oo ay ku jiraan xiritaanka iskuullada iyo xayiraado kale. Tirada faafida cudurkaan iyo dhimashada ayaa kor u kacay isbuucyadii ugu dambeeyay.
“UK iyo Mareykanku waxay lumiyeen fursad,” sidaa waxaa yiri Tikki Pangestu, oo hore uga tirsanaa Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO). “Labo bilood ayay eegayeen waxa Shiinaha ka dhacay, welina waxaa jirta malada ah in ‘Shiinuhu aad uga fog yahay oo aysan dalalkooda waxba ka dhaceynin’.”
Wasaaradda caafimaadka Spain ayaa shaacisay inay jirto koror dhimasho oo 32% ah iyadoo la xaqiijiyay in 1,326 ay u dhinteen fayraska, waana tiradii ugu badneyd ee gudaha Yurub marka laga yimaado Talyaaniga. Shir jaraa`id oo uu xalay qabtay, ayuu Ra`iisul Wasaaraha Spain Pedro Sánchez wuxuu kaga digay in weli xaaladdu aysan fari ka qodneyn oo maalmihii adkaa ay soo socdaan. Dowladda ayaa xayiraad ku soo rogtay 46 milyan oo qof kuwaasoo oo keliya loo oggolaaday inay guryahooda ka baxaan marka ay aadayaan shaqo muhiim ah, soo iibsanayaan cunto iyo sababo caafimaad. Tiro hoggaamiyeyaasha caalamka ah iyo siyaasiyiin ayaa u sheegay muwaaddiniintooda inay ilaaliyaan shuruucda.
Wasiirka Caafimaadka Faransiiska Olivier Véran ayaa cambaareeyay dadka ka soo horjeestay ku dhaqanka kala fogaanshaha bulshada, isaga oo ku tilmaamay inay yihiin “khatar” iyo “kuwo aan mas`uuliyad qaadi karin”. In ka badan 12,500 oo qof oo ku nool Faransiiska ayuu ku dhacay xanuunka coronavirus, iyadoo shalayna ay dhimashada gaartay 562 qof.
In ka badan 2234 o qof oo ku nool dalka Norway ayuu ku dhacay cudurkaan, waxaana u geeriyooday illaa 7 qof sida ay sheegtay warbaahinta dalka Norway, VG. Waxaa xiran dhammaan iskuulada waxbarashada xanaanada caruurta iyo goobaha ay isugu yimaadaan dadweynaha sida garoomada kubada lagu ciyaaro, kafey-yada lagu cabo shaaha iwm. Waxaa sidoo kale jira Soomaali laga helay cudurkaan ee kunool Norway.
Sidoo kale, dalka Jarmalkana waxaa ku nool Soomaali badan kuwaas oo qaar ka mid ah la sheegayo in laga helay cudurka Korona. Maxamed Cabdi Jaamac, oo ku nool magaalada Hamburg ee waddankaas, ayaa markii cudurkaasi laga helay wuxuu yiri,
“Isbitaalkii baan tagay dhacaan bay iga qaadeen kabacdi xaafadaan iska aaday oo annagaa ku soo wacayno ayey dhaheen, ileen jawaabta waxa ay qaadanaysaa 24 saacadood, marka waxyar bay kuu dhiibayaan guuntaad iska galinaysaa waad ku celinaysaa, annagaa ku soo wacayno ayey igu dhaheen oo numbar ayey iga qorteen, hadda dhaw bay isoo waceen oo cudurkii baad qabtaa bay igu dhaheen, laba todobaad waa inaad gurigaaga joogtaa oo aadan bixin.” Wuxuu ugu waramay BBC Somali.
Dalka Mareykanka, Barasaabka New York Andrew Cuomo ayaa isagana cambaareeyay dhalinyarada uu sheegay inay amarka diideen isla markaana koox koox isugu soo baxaya. Sidoo kale, fayraskaan ayaa ka dillaacay dalal badan oo qaaradda Aasiya ku yaalla dhowr toddobaad kahor – qaarkood ayaana lagu ammaanay inay ka adkaadeen xanuunno kale oo hore uga dillaacay. Tusaale ahaan, Singapore, Hong Kong iyo Taiwan ayaa dhammaantood hoos u dhigay kiisaska fayraska – inkastoo ay u dhow yihiin dhulweynaha Shiinaha.
Ra’iisalwasaaraha dalka Talyaaniga, Giuseppe Conte, ayaa sheegay in la xirayo dhammaan goobaha ganacsiga ee aan muhiimka ahayn oo ay warshaduhu ku jiraan, xilli waddankaasi uu la daalaa dhacayo xakamaynta faafitaanka cudurka safmarka ahi ee korona fayruska.
Tallaabadan ayaa imaaneysa iyadoo Talyaaniga laga soo sheegay ku dhawaad 800 oo dhimasho ah shalay, khasaaraha dhimashada korona fayruska ee dalkaasi ayaa gaartay 4,825, waana tirada ugu badan marka loo eego meelaha kale ee uu ka dillaacay fayraska. Lombardy waa gobolka ugu daran dalkaas ee uu fayrasku saameeyay, waxaana ku dhintay ilaa 3,095 oo qof.
Balse Ra’iisal wasaare Conte waxa uu shacabka u xaqiijiyay in dukaamada, farmashiyeyaasha, baananka iyo adeegga boostada ay sii shaqeyn doonaan oo aan la xiri doonin. Hawl-wadeenno caafimaad oo u dhashay dalka Cuba oo ka kooban dhakhaatiir iyo kalkaaliyeyaal caafimaad ayaa ku sii wajahan gobolka Lombardiya ee woqooyiga dalka Talyaaniga, si ay gacan u siiyaan khakhaatiirta la tacaalaya cudurka korona fayrus.
Dalka Shiinaha, 46 qof oo hor leh ayaa laga helay cudurka Korona fayrus balse dadkani ayaa marka laga reebo hal qof waxay xanuunkani kala yimaadeen dibadda, waana muwaadiniin u dhashay dalkaasi oo dibadda ka soo laabtay.
Dalka Australia ayaa noqday dalkii ugu dambeeyay ee ku dhawaaqo qorshe lagu barataarayo dhaqaalaha dalkaasi, si loo yareeyo saameynta dhaqaale ee cudurka korona fayrus. Ra’iisalwasaaraha dalkaasi, Scott Morrison, ayaa sheegay in dowladda dalkaasi ay diyaarinayso 110 bilyan oo doolar oo lagu kabayo dhaqaalaha dadka iyo shirkadaha uu dhaqaale ahaan saameeyay cudurkani.
Cudurkaan korona fayrus wuxuu sidoo kale saameyn ba’an ku leeyahay suuqyada saliida iyo gaaska
Si kastaba ha noqotee, walaacyada iyo qiimaha saliida ee hooseeya way sii jiri karaan illaa laga helayo calaamado cad oo muujinaya in fayrasku ku fidayo. Saamaynta ay ku yeelanayso qiimaha LNG ayaa si isku mid ah u xoogan. Suuqa caalamiga ah ee ‘LNG’ ayaa horeyba loo hayey ka hor inta uusan cudurka dillaacin coronavirus, iyo hoos udhaca baahida Shiinaha ee ka dhalatay faafitaanka ayaa daciifinaya xitaa cadaadis badan. Waxay sidoo kale saameyn ku leedahay dhoofinta caalamiga ah ee LNG.
Tags: Cudurka Korona Fayrus Ayaa Fara ba’an ku Haayo Dalalka Reer Galbeedka
Next post Saamaynta Korona Fayrus Ku Leedahay Suuqyada Saliida iyo Gaaska
Previous post Cudurka Faafa ee Korona Fayrus Ma Lagu Kala Qaadi Karaa Galmada?